Mahavelona Foulpointe : Vazaha nisy namono, nampidirina am-ponja ny sakaizany teo aloha - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversMahavelona Foulpointe : Vazaha nisy namono, nampidirina am-ponja ny sakaizany teo aloha
Mahavelona Foulpointe : Vazaha nisy namono, nampidirina am-ponja ny sakaizany teo aloha
Nisy tranga lasa manaratsy endrika ny distrikan’i Mahavelona Foulpointe sy i Madagasikara niseho tany an-toerana. Nisy mantsy famonoana teratany vahiny nitranga tany an-toerana vao tsy ela, izay nitranga tao an-tokantranony. Raha ny fanazavana dia nitranga ny alin’ny 7 may nifoha ny 8 may teo no nisy namono ity teratany Frantsay antsoina hoe “Michel Délisé” izay 80 taona.
Araka ny fanazavan’ny tonia mpampanoa lalana ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina nisahana ny antontan-taratasin’ady, Atoa Rasamitiana Ladislas, dia ny antoandro zoma 13 may tonga tao an-tranon’ilay teratany Frantsay ny sakaizany teo aloha izay mbola niaraka tamin’ny lehilahy roa hafa, ny iray tamin’izy ireo vadin’ilay ramatoa ny faharoa kosa rahalahim-badiny. Ny anton’io fahatongavan’izy ireo tao amin’ity teratany Frantsay ity dia nandeha nangataka vola hikarakarana zaza marary. Nilaza anefa ilay teratany Frantsay fa “pas maintenant” (tsy mbola androany) izany zavatra izany. Taorian’izay, mpifoha maraina anefa ity teratany Frantsay ity hoy ireo mpifanolam-bodirindrina aminy, satria fanaony ny miarahaba ireo olona ireo vao maraina, vao miditry ny trano izy manao ny sakafo marainany.
Gaga anefa ireo mpifanilam-bodirindrina fa tsy nanao izany ity teratany Frantsay ity, Michel Délisé 80 taona; voatery nijery azy tao an-tranony ireo manodidina azy. Hatairana ny an’ireto fokonolona nahita ny vatana mangatsiaka an’ity Frantsay ity nihosin-drà; ka voatery niantso zandary ireo fokonolona nanao fanadihadina ny raharaha. Nandritra izany fanadihadiana izany no nahitany zandary sy ny fokonolona niaraka taminy, fa efa tsy nihidy hatramin’ny alina ny varavaran’ilay teratany Frantsay, nefa tsy nisy very aloha ny entana tao an-trano, ary raha natao ny fizahana ity teratany Frantsay ity dia teo amin’ny lohany no nisy vaky tamin’ny daroka nahazo azy. Nilaza ny mpanao famotorana fa tsy olona irery no nahavanon-doza, ka antony nisamborina ireo olona telo niakatra fampanoavana teto Toamasina.
Tamin’ny fihainona ireo olona telo niakatra fitsarana ireto, dia naiditra am-ponja vonjy maika ilay renim-pianakaviana sakaizany teo aloha sy ny lehilahy iray vadiny. Tao amin’ny fasana kaomininaly tao Mahavelona Foulpointe ihany no nalevina ilay teratany Frantsay, tamin’ny resaka nifanaovany “consul de France” eto Toamasina sy ny vadiny tany France.